Akụkọ - Otu esi ahọrọ ụdị ose na ikike
Usoro nnu na ose
Nnu Eletriki na Onye Nri ose
Ntuziaka nnu na ose ose
Igwe kọfị kọfị
Ntuziaka kọfị grinder
Ihe mkpuchi seramiiki
Otu esi ahọrọ ụdị ihe eji esi nri ose na ikike
Enwere ike ikwu na ose dị ka ihe na -atọ ụtọ na ọtụtụ efere. Ọ bụrụ na ị nwere igwe na -eghe eghe osere, ị nwere ike jiri ose a mịrị amị gbanye ncha na efere gị. Kedu otu esi ahọrọ ụdị na ike dị iche iche?
Ọdịdị nke ose grinder
1. Ụdị ntuziaka ntuziaka
Ndị hụrụ nri n'anya ga -ahụrịrị ụda na -adọkpụ mgbe a na -etinye ya ose, na isi ya na ya. Ọ bụ nnọọ ọkachamara iji! Agbanyeghị, ụdị ose grinder a nwere ike isi ike ịtụgharị n'ihi ọdịiche n'ụdị ma ọ bụ nha ya. Ọ bụrụ na aka na -amị amị amị ma ọ bụ mmanu mmanu n'oge a na -esi nri, ọ ga -abawanyekwa nhịahụ ọrụ n'ihi nhịahụ;
2. Ụdị ịpị otu aka
A na -arụkarị ya site na ịpị aka n'akụkụ abụọ nke akụkụ elu, ma ọ bụ ịpị bọtịnụ; enwere ike iji otu aka mee ya, nke dabara adaba. N'otu oge ahụ, enwere ọtụtụ ụdị na -atọ ụtọ ịhọrọ. Agbanyeghị, ego a ga -egwe nri n'otu oge na -adịkarị obere, ọ dịkwa mma ka ejiri ya na tebụl dị ka nri n'akụkụ ma e jiri ya tụnyere kichin na -achọ nnukwu ihe.
3. Ụdị ọkụ eletrik
Naanị pịa mgba ọkụ ka ị ga -egwe ose, ọ ga -ejikwa otu aka rụọ ya. Ọ bụ ụdị nzọpụta na ngwa ngwa. Ogo nke mkpụrụ ose dị n'ala na -akarị nke ụdị akwụkwọ ntuziaka, na ose ntụ ntụ anaghị adịkarị apụta.
Ogo na nhọrọ nhọrọ
Na mgbakwunye na mpụta, nha na ikike nke ihe na -egwe ose na -abụkwa akụkụ nke a ga -elebara anya mgbe ịzụrụ ihe.
Karịsịa maka ụdị ntụgharị aka abụọ, ọ bụrụ nha ite ose pere mpe, njide aka ekpe na aka nri dị nso na ọ ga-esiri ike itinye ike. N'ụzọ bụ isi, ma nwoke ma nwanyị nwere ike rụọ ọrụ ihe dị ka sentimita iri na abụọ ma ọ bụ karịa, mana ọ bụrụ ụmụaka na-eji ya, ọbụladị otu aka nwere ike sie ike ịrụ ọrụ n'ihi oke nha. Echefula ịlele nha aka onye ọrụ tupu ịzụrụ, wee họrọ ụdị dabara adaba.
Na mgbakwunye, ole ose nwere ike dabara na igwe nri dịkwa mkpa. Ọ bụrụ na ikike nke igwe igwe nri buru oke ibu, ịtinye ọtụtụ ose n'otu oge mana ejighị ya n'ime oge ụfọdụ nwere ike ime ka ose ahụ hapụ isi ya tupu ọ gwerie ya na iji ya eme ihe. Ya mere, a na -atụ aro ka ị tinye naanị ego ose nwere ike iji n'ime ihe dị ka ọnwa 1 ruo 3, mụbaa ugboro nke ịgbakwụnye ka ọ na -esi ísì ụtọ, ma chekwaa peppercorn fọdụrụ na ebe dị jụụ. N'otu oge ahụ, a ga -anọrịrị ebe a na -esi ose ose n'ebe ọkụ dị elu dị ka stovu gas iji zere mmebi nke mkpụrụ ose.
Oge ezipụ: Mee-24-2021
Kedu otu esi ahọrọ grinder ose site na ọrụ?
Etu ị ga -esi ahọrọ ụdị ihe eji esi nri ose na ca ...
Mmalite nke ose grinder